लकडाउन र अभिभावकको दायित्व
चीनको उवान शहरमा जन्म लिई हाल विश्व भ्रमण गरिरहेको Corona virus (covid-19) ले प्रकृतिको सर्वश्रेष्ठ, विवेकशील विशेषणधारी मानवलाई समेत कोठा भित्रै बन्दी बनाइरहेको छ।
covid-19 को पराजय र मानिसको विजय पश्चात प्रकृतिमा स्वतन्त्ररुपमा विचरण गर्न पाउने अवस्था कहिले र कसरी आउला ? भन्ने कुरा अझै सम्म पनि अनिश्चित नै छ।अहिले विश्वनै जटिल मोडमा पुगी विज्ञानलाई समेत चुनौती दिइरहेको अवस्था छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाबबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन । यो अवधिमा सामाजिक दुरी कायम राख्ने, पटकपटक हात धोइराख्ने, पन्जा, माक्स, चस्माको उचित प्रयोगमा ध्यान दिने जस्ता रोगथामका उपाय अवलम्वन गर्नुको अर्का विकल्प पनि छैन ।
देशमा लकडाउन भइसके पश्चात मानिसका नियमित दैनिकीमा समेत परिवर्तन आएको छ। एक अर्कासँगको भेटघाट, अफिस, विद्यालय, कलकारखाना सम्पूर्ण रुपमा बन्द रहदा यसले सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, शैक्षिक हरेक क्षेत्रमा ठूलो असर परि राखेको छ। यस्तो अवस्थामा हरेक अभिभावकहरु सचेत हुनु जरुरी छ। प्रकृतिमा स्वतन्त्र रुपमा रमाउन चाहने वालवालिकाहरुका निम्ति यो बन्दा वन्दीको मानसिक तनावको असर कतै तपाईहरुका नानीबाबुमा त परेको छैन ? हरेक अभिभावकहरुले बन्दाबन्दीको समयमा पनि सुरक्षित वातावरण सृजना गरी आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नु अत्यन्त जरुरी छ । यतिबेला हामीले हाम्रा बालबच्चालाई समय दिइ खास चासो राख्नु आवश्यक छ।
देश भरी लकडाउन भएपछि SEE परीक्षाको तयारीमा रहेका परिक्षार्थी, विद्यालय तथा विश्व-विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु यतिबेला अभिभावकसँग घर मै छन् । कतिपय अभिभावकको गुनासो सुन्ने गरेको छु । विद्यालय बन्द हुनाले बालबालिकाको पढाइ बिग्रियो, टेलिभिजन, मोवाइलमा धेरै समय बिताउनाले आफ्ना बालबालिकाहरुको सिर्जनात्मकता हराउदै गयो आदि । तर सम्पूर्ण अभिभावकहरुले के कुरा बिर्सनु हुदैन भने बालबालिकाहरुको पहिलो पाठशाला भनेको घरनै हो । पहिलो शिक्षक भनेको माता पिता नै हुन् ।
आफ्नो व्यस्त दैनिकी कारण परिवारमा एक अर्कालाई समय दिन नसक्नेहरुका निम्ति त झन यो समय अवसर पनि हो । परिवारका सबै सदस्य सँगै भइने हुनाले एक अर्कामा आत्मियता, माया, ममताको आदान प्रदानले घरायसी वातावरण रमणीय हुने महत्त्वपुर्ण मौका पनि हो ।
त्यसकारण यस समयको सदुपयोग गर्दै प्रत्येक अभिभावकहरुले आफ्ना बालबालिकाहरु प्रति निर्वाह गर्नु पर्ने भुमिकाहरुलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ ।
१. बालबालिकाहरुलाई पर्याप्त समय दिनु होस्:- हिजो आज दैनिक कार्यव्यस्तताका कारण आफ्ना बाल बच्चालाई पर्याप्त समय दिन नसकि रहेको अवस्थामा उनीहरुसँगै बस्ने, खेल्ने, उनीहरुका रुचीका कुरा गर्ने, उनीहरुका कुरा सुन्ने,उनीहरुकै स्तरका गफगाफ गर्ने ,उनीहरु अनुकुलका खेलहरु खेलिदिने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । जसले गर्दा बालबालिकाहरु धरपरिवारप्रति सकारात्मक बन्न सक्छन् ।
२. बालबालिकाहरुको भावना बुझ्नुहोस्:- आफ्ना बालबालिकाहरुको रुचि के मा छ ? उनीहरु के सोच्छन ? केगर्न मन पराउछन् आदि जस्ता कुराहरुको जानकारी हरेक अभिभाबकले राख्नै पर्छ। प्रतिभा पहिचानमा अभिभावक चुकेका खण्डमा बालबच्चाहरुको सृजनात्मकता मर्न जाने कुरालाई नकार्न सकिदैन । त्यसकारण उनीहरुमा रहेको अन्तर्निहित प्रतिभा वा रुचीका क्षेत्रमा लाग्न प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । जस्तै: चित्र कोर्ने, नाच्ने, गाउने,कथा, कविता लेख्ने ।
३. हौसला/प्रेरणा दिनुहोस्:- बालबालिकाहरुको स्वभावै जिज्ञासु हुन्छ। नयाँ कुरा प्रति उनीहरुको मनमा खुल्दुली रहन्छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरुको जिज्ञसालाई मेटाउनु अभिभावकको कर्तव्य हुन आउछ। सिकाइका क्रममा उनीहरुलाई हौसला, प्रेरणा दिएर अघि बढ्नुपर्छ। उनीहरुले गल्तीनै गरेपनि सकरात्मक प्रेरणा दिएमा अझै प्रोत्साहित हुन्छन्।
४. Role Model बन्नुहोस :- अभिभावकहरुको सिको गर्नु बाल स्वभावै हो । हामीले जस्तो गर्याो उनीहरुले पनि त्यस्तै सिक्दछन् त्यसकारण आफ्नो तनाव कहिल्यै पनि बालबालिका माथि देखाउनु हुदैन । उनीहरुका अगाडि झै-झगडा गर्ने, चुरोट, खैनी, सुर्ती आदि सेवन गर्ने, जाड रक्सी पिउने जस्ता कार्य गर्न हुदैन । अभिभावकका यस्ता कार्यहरुले बाललिकाहरुमा नकरात्मक प्रभाव परी मातापिता प्रतिको आदर सम्मानमा कमी आउँछ । अन्तत: उनीहरु पनि सोही कार्य अनुसरणको बाटोमा लाग्न सक्छन्।
५.नैतिक शिक्षादिनुहोस:-किताबी ज्ञानले मात्र बालबालिकाको बाौद्धिक विकास हुन्छ भन्ने कदापि सोच्नु हुदैन। त्यसकारण किताबी ज्ञानमा मात्र सीमित नराखी नैतिक तथा व्यवहारिक शिक्षा दिनु अत्यन्त आवश्यक छ। जस्तै:- आफुभन्दा ठूलाको आदर गर्ने, सानालाई माया गर्ने, उमेर अनुसार आफ्नो काम आफै गर्ने बानी सिकाउनुपर्दछ। आफ्नो समस्याको समाधान निकाल्न प्रेरित गर्नुपर्दछ। आत्मनिर्भर बन्न सिकाउनु पर्दछ ।
यसका साथसाथै बालबालिकाहरुलाई व्यवहारिक सिपहरु, घरायसी कामहरु, जस्तै:-घर सरसफाई गर्ने, गमला सजाउने, फुल रोप्ने, भान्सा लगायतका काममा आफूसंगै सहभागी गराइ जीवन उपयोगी सीपहरु सिकाउने । परम्परादेखि चलि आएका मुल्य, मान्यता, संस्कार, संस्कृतिहरु सिकाउने ।इनडोर खेलहरु खेल्ने, गीत संगीत, नाचगान जस्ता क्रियाकलापबाट घर परिवारसँगको समय मनोरञ्जनात्मक बनाउन सकिन्छ ।- ( बराल शिक्षिका हुनुहुन्छ ।)
Tags: अभिभावकदायित्वदीपा बराललकडाउन